वाम एक ठामको सङ्केत | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो वाम एक ठामको सङ्केत
on: October 06, 2017 तीतो मीठो
वाम एक ठामको सङ्केत
बूढापाकाहरु भन्ने गर्थे ‘बाँचिरहनुपर्छ, के के देख्न पाइन्छ के के ।’ नभन्दै नेपालका वाम एक ठाम हुन लागेको दृश्य पनि देख्न पाइयो । वामहरुले दशैंलगत्तै नेपाली जनतालाई सरप्राइज दिए ‘जोरका झट्का धीरेसे’ भनेजसरी ।
वामहरुले माक्र्सवाद त्याग गरिसकेको, कम्युनिष्ट सिद्धान्त छाडेर काङ्ग्रेसभन्दा बढी बुर्जुवा बनिसकेको भनिरहेका बेला वामपन्थीलाई हामपन्थी मात्र देखेर प्रचण्डपथ छाडेर नयाँ शक्ति भन्दै हिँडेका बाबुरामसमेत कसरी एक ठाम आए, अचम्म भएको छ । यो घटना नेपाली जनतालाई फेरि उल्लु बनाउने खेल मात्र होला कि राजनीतिको झेल होला कि साँच्चै दलहरुबीचको मेल होला, कसरी थाहा पाउने होला ?
कतै यो वर्तमानको श्रीमान् वा श्रीमतीसँग डिभोर्स नगरी अर्को नयाँ व्यक्तिसँग ‘लिभिङ टुगेदर’ मात्र गरेका हुन् कि राजनीतिका महान् खेलाडीद्वय प्रचण्ड र ओलीले ? कि सत्ताबाट बाहिरै बसिरहनुपर्ने पीरले एमालेलाई सताएकाले यो नतिजा आएको होला ? कि प्रचण्डलाई एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने लोभले कात्तिकको पूर्वसन्ध्यामा जोडिन आइपुगेको गठबन्धन होला ? अर्थात् यो अभूतवपूर्व वाम मिलनको प्रमुख कारण के होला ?
कारण जेजे होला दैवले जानून्, कि उनै नेताहरुले नै जानून् । तर, नयाँ गठबन्धनको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो ? माओवाद हो कि ? बहुदलीय जनवाद पो हो कि ? कि धनवाद मात्र हो ? वा के हो ? भन्नेलगायतका प्रश्नहरुको उत्तर कसले र कहिले देलान् ? हुन त यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न विगतमा पनि आए र हराए । यो पनि त्यसै बिलाउला । हाम्ले पनि बिर्सौंला ।
यता आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादीबीच ६० र ४० को भागबण्डा तय भएछ । अर्थात् माओवादी ४० कटेसी रमाउने भएछन्, एमाले ६० कटेसी । हिजो काङ्ग्रेसले प्रयोग गरेको सूत्र अहिले वामहरुले पनि लगाएछन् । यसबाट सुखै पाउलान् । तर माओवादी छाडेर एमाले छिरेका र एमाले छाडेर माओवादी छिरेकाहरुको भूकम्पबाट उठिबास भएकाहरुको जस्तो बिचल्ली पो हुने हो कि ?
हिजोसम्म माओवादी र एमाले एकअर्काको दृष्टिकोणमा एउटा चरम लम्पसारवादी थियो भने अर्को सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी । एउटा ‘घोर उग्रवादी’ थियो, अर्को संसदीय भासमा फसेर बिग्रिएको साम्यवादी । अब यिनीहरुले एकअर्कालाई गर्ने सम्बोधनमा कुनकुन नयाँ शब्दावली पर्लान् ? फेरि यो गठबन्धन चैं उत्तरले चाँजोपाँजो मिलाएर सम्भव भएकाले रे । यसको मतलब अब दक्षिणले के भन्छ भनेर कुर्नेहरु पनि होलान् । सके कुरा बुझ्न दिल्ली धाउनेहरु पनि होलान् । फेरि मिलाउनेहरुले फुटाउन बेर पनि नलाउलान् ।
यता वाम एक ठाम हुन पा छैन, काङ्ग्रेसमा भने ठूलै भूकम्प गए जस्तो छ । ‘अब तेरा क्या होगा कालीया’ भनेजस्तै काङ्ग्रेसको हाल भएको छ । लोकतान्त्रिक शक्तिको नयाँ खिचडी पाक्न शुरु भएको छ । अब शेरबहादुर देउवाद्वारा रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का र शशाङ्क कोइरालासँग चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकताको घोषणा गर्नेछन् भनेर भविष्यवाणी गर्नेहरुको पनि कमी छैन । त्यस्तै, कम्युनिष्टहरु मिलेसी तानाशाही जन्मने भो भनेर डराउनेहरु पनि धेरै छन् । तर, नेपाली कम्युनिष्टहरु शाही भएकाले तानाशाही बन्न सक्दैनन् भन्ने यो पङ्क्तिकारको बुझाइ रहेको छ ।
‘कसलाई के धन्दा, घरज्वाइँलाई खानकै धन्दा’ भनेजस्तो शेयरबजारका थुप्रै लगानीकर्ताहरु भने अब बजार घट्ला कि बढ्ला भनेर नेप्से परिसूचक हेरी जिल्ल पर्दै टोलाएर बसेका छन् । एमाले बैङ्क, माओवादी विकास बैङ्क र नयाँ शक्ति फाइनान्स कम्पनी मर्ज हुने कुरा गर्नेबित्तिकै शेयरबजारमा त्यत्ति उतारचढाव नआउला । त्यसैले सुझाव के छ भने वाम सबै टुक्रिए पनि एकै ठाम भए पनि अहिले सबै नेपाली नेताहरुलाई शेयरको नशा बसिसकेको छ । प्रायः सबैको थुप्रै कम्पनीमा ठूलै लगानी पनि भइसकेको छ । भनेसी शेयर बजार वाम एकताकै कारण किन डराउँथ्यो र अब पनि ? त्यसैले लगानीकर्ता अब डराइरहन नपर्ला ।
धेरै मानिस ‘वाम एक ठाम’ हुन लागेको कुरा यो देश बन्न लागेको सङ्केत हो कि सिद्धिन लागेको भन्ने द्विविधामा पनि देखिन्छन् । फुट्नुभन्दा त जुट्नु नै राम्रो हो नि, होइन र ? एउटा दलले चुनावमा बहुमत ल्याएर ५ वर्ष सरकार चलाउन पाए अरु क्यै नआए पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व त आउँछ कि ? यसले सत्ताको च्याँखे थाप्नेहरुको भाउ पनि घट्ला । बरु एउटा कुरामा भने पनि नेपाल अब बेलायत वा अमेरिकाजस्तै हुन्छ । किनभने त्यहाँ जम्मा दुई पार्टी मात्र छन्, यहाँ पनि ‘हामी र हाम्रा दुई’ भनेजस्ता वाम र काङ् दुई मात्र हुने भए । त्यसैले वाम नेताहरुको एकै ठाममा उठेका हातहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि अठोट देखाए भने देश बन्ने सङ्केत हो । होइन रहेछ भने यो पनि हिन्दी सिरियलको अर्को एउटा ‘एपिसोड’ जस्तो मात्र हुनेछ । हेरुञ्जेल एकछिन के के नै होला जस्तो, एपिसोड सिद्धिएपछि फेरि अन्धकार । अर्थात् चुनाउ सिद्धिएपछि नेपाली राजनीतिमा एकता नभई ए ! कता भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ ।